रूसी भाषा को expressiveness अक्सर बुझ्न, मात्र विदेशीहरू, तर पनि compatriots एकदम गाह्रो छ। phraseology को प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, colloquial भिन्न, डबल र ट्रिपल अर्थ को एक विशाल संख्या एक जटिल Maze यसलाई गर्दछ। उदाहरणका लागि, एक धेरै नै सरल वाक्यांश वास्तवमा "भ्रूभंग" भाषाई अनुसन्धान को लागि धेरै रोचक हुन बाहिर जान्छ। कसरी सही यो अभिव्यक्ति प्रयोग गर्न? केही अवस्थामा यो एक पर्यायवाचीशब्दप्रविष्टगर्नुहोस् चयन गर्न राम्रो छ?
expressive अनुहार अभिव्यक्ति
पहिलो, विभिन्न भावनाहरू अर्थ, को नकल अभिव्यक्ति विवरण को पाठ्यक्रम हो। र कसरी किन भ्रूभंग गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईं तल नाक गर्न eyebrows कम भने, हामी आफ्नो अनुहार मा एक क्रोधित अभिव्यक्ति प्राप्त, यो भन्दा अवस्थामा छ र हामीलाई अघि वाक्यांश प्रयोग गर्दा मनमा छ।
तपाईं मात्र होइन एक क्रोधित मुड मा, भ्रूभंग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी धेरै मानिसहरू आफ्नो एकाग्रता, गम्भीरता, विचारशीलता व्यक्त। अस्पष्ट अनुहार manifestations, व्यक्ति भावना कायममुकायम वा एक भन्दा peculiar तरिकामा तिनीहरूलाई संयोजन गर्न। साहित्य सामान्य छ - एक मजबूत कलात्मक उपकरण - वाक्यांश "हास्य आँसु मार्फत" कसैले उहाँले, र शोक वा दुखाइ को मजा भइरहेको थियो किनभने हाँस्नुहुन्छ गर्दा। शायद, प्रत्येक व्यक्ति एक सुरक्षा मास्क रूपमा अंकित के मेरो प्राण छैन भइरहेको थियो जहाँ थियो अवस्थामा, र धेरै फरक भावना को स्मृति फेला गरिनेछ।
सेट वाक्यांश मा अनुहार अभिव्यक्ति को वर्णन प्रयोग
यो टिप्पण नै "भ्रूभंग" को अभिव्यक्ति हो भनेर लायक छ किनभने अरू केही एक भ्रूभंग काम गर्दैन, अनावश्यक छ। तपाईं frowned सक्दैन गाला, कान वा ओठ - यो विशेष गरेको छ eyebrows। यस मामला मा, आँखा, मुस्कान, वा दृश्यहरु कि, मानिसहरू आफ्नो मुड व्यक्त, एक विशेषता मुख बिगाराइ बनाउन जसमा भावना मेल छ, उदास हुन सक्छ।
केही अवस्थामा, वर्णन अनुहार अभिव्यक्ति अभिव्यक्तिले साहित्य वा बस दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिन्छ? जब बस वाक्यांश बिना गर्न सक्नुहुन्न "भ्रूभंग"? Phraseologism मूल्य सीधा आधारभूत भावना, एक मुख बिगाराइ सँगसँगै छ जो जोडिएको छ। त्यसैले, तपाईं अक्सर सल्लाह द्वारा फोन वा भर्चुअल संचार मा, पनि अदृश्य interlocutor को सम्बन्ध मा भ्रूभंग गर्न सुन्न सक्नुहुन्छ। वाक्यांश "अब यो eyebrows निट" अर्थ प्रयोग गरिन्छ "र अब उहाँले रिसाउनुहुन्छ" (वा आहत वा तीव्र चाह गर्छन्.)।
भ्रूभंग विभिन्न तरिकामा
भावना को रंग जोड गर्न, अक्सर क्वालिफाइङ विशेषण प्रयोग। भ्रूभंग, menacing क्रोधित, कडी, दुःखी, दुःखी हुन सक्छ, आनन्द, केन्द्रित, निर्धारित। इच्छित भने, तपाईं आफ्नो तरिका र निर्दिष्ट अनुहार अभिव्यक्ति लागि कारण आविष्कार गर्न सक्नुहुन्छ, र मानव भावना unambiguous छलफल गर्न सक्दैन किनभने हुन तिनीहरू कुनै पनि, अनौठो हुनेछ।
अभिव्यक्ति प्रयोग को औचित्य
कविता र साहित्य कल्पना र narrative convexity लागि idioms प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने केही अवस्थामा, यो हेर्न छैन हास्यास्पद भनेर केही पाठ परिवर्तन गर्न सिफारिस गरिएको छ। आधिकारिक ठेगाना कलात्मक चित्र सिफारिस गरिएको छैन - यो अत्यधिक र अनुचित मानिन्छ, त्यसैले यो शायद एक वकील सल्लाह गर्न सक्छन् कसैले "भ्रूभंग" छ। पर्यायवाची पढाइ duality बच्न यस्तो छनौट गर्नुपर्छ, यसलाई उच्च कविता मा मनोरञ्जन वा पदहरू लागि अनुज्ञेय छ।
यो विशेष गरी यदि हामी एक लिखित बयान कुरा गरिन्छ, भावनात्मक वाक्पद्घति छ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ। आफै पढेर overtones मा माग्छ कि भावना भन्छन्, र यो उसलाई तंग कि निर्णय भने, यो पाठ मात्र संकलक दोष हुनेछ। त्यसैले सट्टा ", भ्रूभंग नगर्नुहोस्" छैन राम्रो भवदीय आहत सोध्न, क्षमा चाहन्छौं र एउटा सम्झौता गर्न आउनुहोस्।
विशेषण को रूप मा माथि सूचीबद्ध गरिएको छ जो गलत अर्थ शब्द भावना संकेत जोगिन मद्दत गर्नुहोस्। छैन "brows angrily, furrowed" र "क्रोधित।" प्रायजसो, यो पर्याप्त छ।
idioms को कलात्मक तस्बिरहरू सिर्जना गर्न सबैभन्दा अनमोल साधन हो। तिनीहरूले जसबाट एक लेखक वा कवि चित्र, जीवित बन्न सास, रंग भरिएको सुरु सिर्जना, केही स्ट्रोक मा भावना पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ। "निन्याउरो" - को कवि उदास साँझ एक अनुहार अभिव्यक्ति गर्न श्रेय थियो भने त, एक गाढा र गंभीर भावनात्मक रंग संग वाक्पद्घति, त्यसपछि कुनै perplexity पाठकहरूलाई, अर्कोतर्फ, त्यहाँ गहिरो बुझाइ छ। को PM कुनै अनुहार, eyebrows छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, उहाँले भ्रूभंग गर्न केही भएको थियो।
प्रतीकात्मक अर्थमा भ्रूभंग, गर्न सक्छन् केहि - एक पाइन वन, आकाश, साँझ समीर। जब कवि उहाँले मनमा भएको अवलोकनकर्ताले देखि उत्पन्न कि केवल भावना छ कि, एक उदास दिन वर्णन गर्दछ। एक साहित्यिक काम सिर्जना गर्दा, लेखक केहि एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति द्वारा दूर हुन सक्छ, र त्यसपछि यो जसको लागि उद्देश्य हराइदिन्छ रूपकहरुको को jumble, बाहिर क्रमबद्ध गर्न गाह्रो हुन्छ। मध्यम प्रयोग पाठ, त्यसको विपरीत, यो आवश्यक पाठक गुणस्तर असर गर्न हुन्छ र आनन्द दिन्छ।
Dryad - एक सुन्दर परी र पहाड फूल
Anisotropic फिल्टर। विस्तार को व्यावहारिक प्रयोग: anisotropic फिल्टरिङ
राजधानी बजार र यसको सुविधाहरू
एक उपहार रूपमा केक "Mignon": बच्चाहरु पार्टी लागि तयारी